Bandhig: Anfac - Ceerigaabo
Naadiga Anfac Readers Club oo soo bandhigay buuggoodii saddexaad
Naadiga Akhristeyaasha Anfac Readers Club ee magaalada Ceerigaabo ayaa 10/09/2009 hoolka shirarka ee dugsiga sare ee X. Aadan kusoo bandhigay buuggoodii 3aad.
Xafladdan oo ay kasoo qayb galeen maamulka dugsiga, ardayda iyo marti sharaf kaleba waxa xubnaha naadigu kusoo bandhigeen buugaag farabadan oo ay sheegeen inay kamid yihiin agabka Naadiga, buugaagtaas oo afaf kala duwan isugu jirtay.
Xafladdu waxay ku bilaabantay shaacinta naadigan ee ardayda dhexdeeda iyo warbixino ku saabsan naadiyada dalka ka dhisan iyo sida Naadigani wada shaqaynta ula leeyahay. Buugga lasoo bandhigay oo ah buug ka hadlayay bisha Ramadaan laguna magcaabo (Abu Shujaac) waxana soo jeediyey Xasan Barre Warsame.
Sidoo kale waxa madasha ka halday qaar ka mid ah macalimiinta dugsiga wax ka barta waxana ugu danbayntii xaflada soo xidhay maamulaha dugsiga sare Maxamed Siciid Mulaax oo sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay waxqabadka Naadiga.
Anfac Readers Club
Contents published on: 2009-09-14 (793 reads)